सरकारी अस्पतालमा बेथिति -::DainikPatra
सरकारी अस्पतालमा बेथिति
पाल्पा । जिल्लाको एक मात्र सरकारी पाल्पा अस्पतालको लापरवाही र अस्पताल भित्रका बेथितिले सीमा नाघेको छ । अस्पतालका प्रमुख डा. भाष्कर हुमागाईको दादागिरि प्रति जिल्लामा कसैको चासो नपुगेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
जिल्ला अस्पताल पाल्पाको सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा पुगेका अभियान्ता, पत्रकार र सेवाग्राहीले अस्पतालको बेथितिका बारेमा कुरा रख्दा समेत डक्टर हुमागाईले पत्रकार माथि नै कडा प्रतिकार गरेका छन् । आम सर्वसाधरणको कुरा कति सुन्छन् र सुन्थे नागरिका गुनासो समेत राम्रोसँग सम्बोधन गरेनन् । जिल्ला अस्पतालको शौचालय जानै नसकिने अवस्थामा छ । बिरामीहरु र बिरामीका कुरुवाहरु शौचालय जानै सक्दैनन ।
तानसेनका सेवाग्राही रमेश खनालले शौचालयको तस्विर नै खिचेर देखाउँदै भने, ‘जिल्लाको एक मात्र अस्पतालको यो कन्त बिजोगले हामी नागरिक कति दिन सास्ती पाउने हो ?’ उनले भने, ‘अस्पतालका विरामीलाई स्लाइन पानी चढाएर स्वास्थ्यकर्मीले नियमित रेखदेख नगरेकै कारण बिरामी उल्टै ब्लड स्लाईनले थुतेको अवस्था छ ।’ कार्याक्रममा उपस्थित भएका जिल्लाका अन्य नागरिकले डेन्टल सेवाका आवश्यक सामग्री खरिद भएको तर जनशक्ति अभावमा बन्द रहेको गुनासो गरे । चिकित्सकले ओपिडी सेवा प्रदान गर्दा राख्नु पर्ने रेकर्ड व्यवस्थित नभएको, अति आवश्यक औषधी सिटामोल, सुगरको औषधिसमेत अस्पतालमा नियमित उपलब्ध नभएको गुनासो गरे ।
अस्पतालले औषधि लिन फार्मेसीमा जाँदा साझा पसलमा पठाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस जिल्ला सचिव अजयमान कर्माचार्य, नेकपा एमालेका कमल पाण्डे, जनमोर्चाका विशाल दर्लामी, उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतले पाल्पा अस्पातालको कमी कमजोरीका बारेमा गुनासा राख्दै अस्पताल सुधारमा जिल्ला समन्यव समिति र नगरपालिकाले नै ध्यान नदिएको आरोप लगाए । आगामी दिनमा अस्पतालले अबका आम जनताको पक्षमा काम गर्न उनीहरुले सुभाव दिएका थिए । पत्रकार रेखीराम राना, कृष्ण कार्की, मिलन विक, नेत्र गैरेले पाल्पा अस्पतालमा अनुगमन गर्ने क्रममा भेटिएका अस्पतालका कमजोरी पक्ष बताए ।
कार्यक्रममा पुगेका इन्द्रेणी समाजका रुद्र मसाङ्गीले भने अस्पतालको लापरवाही कैे कारण वर्षौदेखि पाल्पामा बसेका अति गरिब मुस्कानको मृत्यु भएको गुनसाो गरे । डा. हुमागाईले भने गरिब र फोहोरी बिरामीहरुको बेवास्ता गरेको गौरवका साथ सुनाएका थिए । अस्पतालमा हुनुपर्ने निशुल्क औषधि पूरा छैन । साथै स्वास्थ्य विमाका औषधिसमेत अस्पताल फार्मेसीमा केही मात्र छन् ।
यहा“ आउने सेवाग्राहीले पिउने पानी नभएको गुनासो गरेका छन । सामाजिक परीक्षक कार्कीका अनुसार युरो गार्डले काम गरेको थिएन । स्वास्थ्यकर्मी ९ बजे अस्पताल हाजिर हुनुपर्नेमा १० बजेपछि मात्र उपस्थित हुने गरेको भर्ना भएका बिरामीको गुनासो छ । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुले सुविधा लिई तोकेको पोशाक नलगाएको गुनासो सार्वजनिक गरे । अस्पताल प्रमुखले मनोमानी र एकलौटी रुपमा आर्थिक कारोवारमा सलग्न रहेको अस्पतालकै कर्मचारीको गुनासो छ । अस्पतालको प्रशासनिक कक्ष नै छैन । विगतमा भएका निर्णय र सम्पादन गरिएको गतिविधिको दस्तावेज व्यवस्थित नभएको सार्वजनिक परीक्षक रेखीराम रानाले सार्वजनिक गरे ।
बिरामी सहायता कक्ष प्रयोगविहीन भएको छ । बिमा कार्यक्रम संचालन गर्न कर्मचारी नै छैनन् । अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिएको उनले बताए । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बैठक बस्ने नबसेको गुनासो आएको बताउ“दै उनले बिहान ८ बजेदेखि हुँदै आएको प्रयोगशाला सेवा कर्मचारी नहु“दा बन्द भएको बताए । शौचालय र बेसिनमा पानी आउँदैन ।
भर्ना भएका बिरामीलाई प्रदान गरिने खाना, नास्ता मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै नभएको भेटिएको सामाजिक परीक्षणका क्रममा जानकारी गराइएको छ । बिरामी भर्ना कक्ष फोहोर, वेड सिट फोहोर गन्हाउने र बिरामीलाई लामखुटेले टोक्ने समस्या भएको गुनासो राखेका थिए । बिरामीलाई स्लाइन चढाएर स्वास्थ्यकर्मीले नियमित अनुगमन गर्ने नगरेको गुनासो पनि आएको उनले बताए । १५ वेडको अस्पतालमा अक्सिजनको सेट दुई वटा मात्र छ ।
अत्यावश्यक मानिने औषधि सिटामोल, सुगरको औषधिसमेत नियमित उपलब्ध नभएको गुनासो आएको छ । डेन्टल सेवामा आवश्यक सामग्री खरिद भएको तर जनशक्ति अभावमा बन्द रहेको छ । चिकित्सकहरुले ओपिडी सेवा प्रदान गर्दा राख्नु पर्ने रेकर्ड व्यवस्थित नभएको पाइएको सामाजिक परीक्षक गर्न पुगेका नेत्र गैरेले बताए । अस्पताल कर्मचारी मैत्री नभएको पाइएको छ भने प्रतिक्षा कक्षमा सौजन्य प्राप्त टि.भी बन्द अवस्थामा रहेको छ । सूचना पाटीको प्रयोगविहीन छ । औषधि लिन फार्मेसीमा जा“दा साझा पठाउने गरेको गुनासो राखेका छन् । अस्पताल १२ देखि १ बजेसम्म सेवा बन्द हु“दा सेवा लिन समस्या भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
चिकित्सक र कर्मचारीको शौचालय बन्द गरी अन्य शौचालय फोहोर हु“दा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । सुत्केरी हुन आउ“दा स्वास्थ्यकर्मीले बेवास्ता गरी बच्चा बाहिरै जन्मिएको गुनासोसमेत सेवाग्राहीले राखे । बिरामी भर्ना भएपछि पोशाक परिवर्तन गर्नुपर्छ तर नभएको गुनासो गरेका छन् ।
बिरामीलाई व्यवहार राम्रो नभएको गुनासो राखे । पछिल्लो समय निर्माण भएको फार्मेसीका अगाडि टायर बिच्छ्याइएको छ । तर बिरामी जाँच गर्ने र बिरामी भर्ना गर्ने स्थानमा पुग्दा भने चर्पी गन्हाएर बिरामी हैरान खेप्न बाध्य भएको गुनासो राखे । बिरामी जा“च गर्ने डाक्टरसमेत गन्हाएको शौचालयबाट हैरानी खेपे पनि बोल्न सक्दैनन् । बिरामीले भर्ना भएर बस्न नसकेर आफै डिस्चार्ज माग्ने अवस्था यहा“ छ । सेवाग्राहीले अहिले पनि ७० प्रकारको औषधि पाएका छैनन ।
जिल्ला अस्पतालका डाक्टर भाष्कार हुमागाईले आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षणमा जनताले राखेका गुनासालाई च्यात्ने प्रयास गरेपछि केही समय वातावरण विथोलिएको थियो । सामाजिक परीक्षणमा केही गुनासा आउँदा च्यात्न खोज्ने डाक्टरको शैलीलाई सहभागीले ‘बा“दरे प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिएका थिए ।